DxOMark nwalere ma gosipụta igwefoto Honor V30 Pro | Gam akporosis
The Honor V30 Pro dị ka ekwentị nke abụọ nwere igwefoto kachasị mma na ogo DxOMark
Amalitere na December nke afọ gara aga, ndị Sọpụrụ V30 Pro Ọ etinyewo onwe ya n'elu ahịa ahịa smartphone dị ka otu n'ime ihe kachasị mma, n'enweghị obi abụọ. Nke a bụ n'ihi na o nwere ọtụtụ atụmatụ dị elu na nkọwapụta teknụzụ, nke bụ ọrụ maka inye ya aha ekwentị dị elu nke na-etu ọnụ.
Akụkụ foto ya bụ otu n'ime isi ihe mara mma, ịbụ otu n'ime ndị kacha mma taa. Ọ bụ ya mere DxOMark ji kpebie ịnwale ya ma dee etu ọ dị mma.
Nke a bụ ihe DxOMark na-ekwu banyere igwefoto Honor V30 Pro
Sọpụrụ V30 Pro Nyocha Ule Igwefoto site DxOMark
Site na ngụkọta nke 122 na DxOMark, na Honor V30 Pro ghọrọ nke abụọ kachasị akụrụngwa na nchekwa data nke ikpo okwu. N'etiti Huawei Mate 30 Pro 5G ekwentị mkpanaaka (123) na Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition (121), ebe atọ kacha elu ugbu a bụ ngwaọrụ ndị China.
Na ụdị foto, Honor V30 Pro nọ n'ọnọdụ nke abụọ, yana 133, dị n'azụ Huawei Mate 30 Pro 5G, nke debanyere akara nke 134. Isi ihe dị iche n'etiti nọmba abụọ bụ n'ihi ọdịda oge nke akpaghị aka na-ada n'oge ụfọdụ. nke Honor V30 Pro, mana ma ọ bụghị na ha na-apụta nnọọ yiri na gbaa.
Abali nke abali, nkwekorita nke bokeh, nchekwa zuru ezu, na ikpughe bu ufodu ike kachasi ike Honor V30 Pro. ọnọdụ abalị na-eme ka ngosipụta na-enwu gbaa na nkọwa obi ụtọ. Ihe osise Flash n'abalị dịkwa ezigbo mma, na-ekpughere ya nke ọma na isiokwu ahụ yana nkọwa zuru ezu na ndabere, ma e jiri ya tụnyere mpi isi.
Sọpụrụ V30 Pro ụbọchị foto | DxOMark
Banyere ihe ndekọ vidiyo, Honor V30 Pro na-anọdụ n'ọnọdụ nke asaa n'ogo n'ogo, mana vidiyo vidiyo nke 100 bụ naanị 2 isi dị n'azụ Huawei Mate 30 Pro, nke meriri 102 na ụdị ahụ. (Chọpụta: Ejiri DxOMark họpụtara igwefoto Asus ROG 2, ma ọ bụghị nke akpọrọ)
Na nyocha ngosi nke DxOMark, Honor V30 Pro na-arụ ọrụ. Ngwaọrụ Honor dị mma n’èzí, kamakwa ọ na-anapụta ezi ngosipụta lens dị na ọnọdụ ọkụ. Ihe iche dịkwa mma na ọnọdụ ọkụ niile. N'aka nke ya, na ihe ngosi dị iche iche dị n'èzí dị iche iche siri ike, usoro dị omimi sara mbara nke ukwuu, yana nkọwa echekwara na mpaghara ọkụ na ndò.
Sọpụrụ V30 Pro foto abalị | DxOMark
Dabere na eserese eserese azụ n'ime ụlọ, Honor V30 Pro nwere ike ịnye ọfụma na isiokwu ahụ, ebe ọ na-edebe ọtụtụ nkọwa nkọwa na-apụ apụ n'èzí. Fọdụ ihe nkwụsị pụtara ìhè na ihe ịma aka ndị siri ike, na-ekpughere ya n'ogo dịka Huawei Mate 30 Pro.
N'ozuzu ya, mmeputakwa agba dị mma na Honor V30 Pro, nke nwere agba zuru oke na nke zuru oke na ọnọdụ ọkụ niile. Ogologo ocha zuru oke na-anọpụ iche, ọ bụ ezie na obere nkedo na-acha ọcha na-apụta ìhè na ndò nke onyogho na-apụ apụ, nke a na-ahụkarị na agba dị elu. Agbanyeghị, ajị anụ ahụ dabara nke ọma ma a na-ejikwa ihe ndozi agba na-achịkwa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onyogho niile, na-enwe naanị obere mgbanwe na-ada ụda na-egosi oke obere ọkụ. Na mgbakwunye, nguzozi n’etiti udidi na mkpọtụ bụ ike dị mkpa maka Honor V30 Pro, ebe ọ nwere ike ijigide ọkwa dị elu n’ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onyogho niile ma hụ na mkpọtụ mkpọtụ pere mpe.
Autofocus bụ mpaghara mmelite maka Honor na ngwaọrụ flagship n'ọdịnihu. Agbanyeghị na ọ dị oke egwu na V30 Pro, nkenke oge ụfọdụ na-emetụta akara ya niile. Nnukwu ihe mmetụta nke ngwaọrụ ahụ na oghere oghere f / 1.6 pụtakwara na omimi nke ubi dị warara, na-eduga na njedebe nke ịdị nkọ na ihe na obere nsonaazụ na-ekwekọghị ekwekọ.
Foto dị n'ime Honor V30 Pro | DxOMark
N'iji otu ngwaike igwefoto dika Huawei Mate 30 Pro 5G, nsonaazụ mbugharị nke Honor V30 yiri nke ahụ, ọ bụ ezie na paịpụlị ihe eji emezi ihe emeela ka nkọwa dịtụ mma karịa. Na obere ma n'etiti etiti, nkọwa dị ezigbo mma na Honor V30 Pro na ọnọdụ ọkụ niile na ọkwa mkpọtụ dị obere. N'ebe dị anya, nkọwa na-ejide nke ọma na ọnọdụ ọkụ na-enwu gbaa. Tụkwasị na nke a, nhazi usoro onyonyo nke Honor V30 Pro na-eme ka ihu ọma dị mma na ngosi ihu na gbaa ma e jiri ya tụnyere Huawei Mate 30 Pro 5G.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » The Honor V30 Pro dị ka ekwentị nke abụọ nwere igwefoto kachasị mma na ogo DxOMark
Igwefoto 708 IMX48 Sony Sony bụ nke Oppo Find X2 ga-enwe
Pocophone F1 na-enweta anụrị gam akporo 10 OTA